Enter မှားခေါက် မိတာပါ — MYSTERY ZILLION
Enter မှားခေါက် မိတာပါ
အမ်ဇက် ဖရန့်များအားလုံးမင်္ဂလာပါ..:103:
မနေ ့က အွန်လိုင်းစ၀င်၀င် ချင်း ဘာကို လည်းမသိဘူး အပ်ပဒိတ်လုပ်မလားလို့မေးတာ မျောက်ရဲ အလုပ်က့ ဖရန့်က လက်ဆော့ပြီး အန်းတားခေါက်လိုက်ပါတယ်...အဲဒါကို မျောက် မသိလိုက်ပါဘူး...
နောက်သူပြောမှသိတာပါ...မျောက် ရဲ့ပုံတင်ထားတဲ့ဒက်စတော့ လည်းမတွေ ့တော့ ဘူး... အော်တိုကို ပြောင်းသွားတာအားလုံးနက်ပြာရောင်ကို ... မျောက်စိတ်ထင် ၀င်းဒိုးကို အပ်ပဒိတ်လုပ်မိသွားတယ်နဲ ့တူတယ်...
ပြီးတော့ဒက်စတော့ ရဲ ့ညာဘက် အောက်ခြေမှာ Genuine Microsoft software ဆိုပြီး ပြနေတယ်... ဖျောက်လို ့လည်းမရပါဘူး...:14: Icon ပုံက Star Fish ပုံနဲ ့ပါ... Shut down ချရင် လည်း မကျတော့ဘူး... :2:ပါ၀ါပိတ်လိုက်မှကျတော့ တယ်.. အဲလိုသာနေ ့တိုင်းဆိုရင်တော့သေရချည်ရဲ ့.....၀င်းဒိုးတက် ရင် လည်း Resolve Now နဲ့Resolve Later ကို ရွေးခိုင်းပါတယ်... တိုက် ရိုက် ကို မတက်တော့ပါဘူး... ချိတ်ညစ်တယ်....
အဲဒါနဲ့ညက Window Xp Sp (3) 2008 ကို ပြန် ထည့်ပြီး Serial Key လေးပြန်ထည် ့ပြီး ရလို ရငြားလုပ် ကြည့်ပါသေးတယ်.. မထူးတော့ပါ:106: ၀င်းဒိုးတက် ရင် အရင် အတိုင်းပဲ မေးမေးပြီးမှတက်ပါတော့ တယ်... မျောက် ရဲ့ဆော့၀ဲအတု ဆို တာ သိသွားပြီး....:((:((:((
အဲဒါကူညီကြပါဦးဖရန့်တို့ရေ...
rar ကို ဖြေလိုက် ပီးရင် installer.bat ကို run လိုက်ပါ ပီးရင် restart လုပ်လိုက်
အိုင်ဖိုင်းကဆွဲမရရရင် ...အောက်မှာတစ်ခုပေးထားတဲ့ဟာနဲ့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်..အဲဒီ link ကနေ ကြိုက်တဲ့့hosting ကနေဆွဲ.. အဆင်ပြေမှာပါ..
မျောက်တင်မဟုတ်ဘူး မျောက်အပေါင်းအဖော်တွေပါ တယ်ဆော့ပါလား :D:D
ဒါလေးရမ်းပြီး ရီစတက်ချကြည့် ပါမျောက်ရေ မပျေက်ရင်ပြန်ပြောနော်.... တစ်ခြားတစ်ခုထပ်ရှာပေးမယ်... :D:D
ကျွန်တော်လဲကြုံဖူးဘူးဗျ repair သာလုပ်လိုက်ပါဗျာ မကြာပါဘူး
မရသေးဘူး ကိုရသာရေ....လီစတက် ချပြီး လည်း နဂိုအတိုင်း ပဲ ပြန်ပြန်ပေါ်နေပါတယ်... အင်စတော်လာတွေက မအိအိရန်ကုန်ဟာနဲ ့တူတူ ပဲ... အင်စတော်လာကို Run ပြီးရင် လီစတက်ကျပြီး နဂိုအတိုင်းပါပဲ ထူးခြားမှုမရှိသေးပါဘူး...(အဟင့်နာ ့ကွန်ပျူတာလေးတော့တွားပီနဲ ့တူတယ်):((:((:((
ကိုမိုးဇက်ကိုရေ... မရသးဘူး... အင်စတော်လာကို Run တယ် ဒါဗေမယ့်လီစတက်ကျပြီး ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာလည်း Resolve Now နဲ့Resolve Later ကို မေးပြီးမှတက်တယ်..ပြီးတော့ပေါ်မြဲတိုင်းပေါ်နေပါသးတယ်... မထူးခြားသေးပါ ဘရားသားရေ ့:((
ကျွန်တော်ကတော့ မင်ညူရယ်လုပ်နည်းပဲပြောတော့မယ်နော်။ သတိတော့ထားပါ မှားပြီးဖျက်မိရင် အဖတ်ဆယ်လို့မရဘူးနော်။ အဲဒါလေးအရင်စိတ်ထဲထား
1. Run ကနေပြီး regedit ရိုက် enter
2. Registry Editor ထဲမှာ ဒီနေရာကိုသွားပါ HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon\_Notify
3. WgaLogon ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဖျက်လိုက်ပါ။
4. Restart လုပ်ပါ။
5. WgaLogon.exe, WgaLogon.dll ဆိုတာတွေကို C:\_Windows\_System32\_ အောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်။ အဲဒီဖိုင်ကိုဖျက်ပါ။
1. Run ကနေပြီး regiedit ရိုက် enterဒါဆိုရင်အိုကေသွားပါပြီ
ကိုရောင်စိန်ရေ...အဲဒီ regiedit ကို Run မှာ ရိုက်လို့မရပါဘူး.. Window can't find and try again ဆိုပြီး တော့ပဲ ပြနေတယ်...
ကီးများမှားနေတာလား ပြန်တင် ပေးပါဦး Bro :103:
ဒီလိုပုံလေးနဲ့ Windows Genuine Advantages ဒီစာသားနဲ့ ပေါ်နေတာဆိုရင် Windows XP ထဲမှာပါလာတဲ့ program တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ Windows ဟာ License Version ဟုတ်မဟုတ်ကို စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ လိုင်စင်ဗားရှင်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာနဲ့ တပြိုင်နက် သင်ဟာ Genuine Victim တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီဆိုပြီး သူက ပြောပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတဲ့အခါမှာ ၀င်းဒိုးထဲက ဟိုဟာဒီဟာဖွင့်လို့မရအောင် စပြီး တားဆီးပါတော့တယ်။ Auto update ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ အခြား Windows software အသစ် ဖြစ်စေ တင်မိရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ သုံးနေတဲ့ ၀င်းဒိုးက လိုင်စင်ဗားရှင်း ဟုတ်မဟုတ် ကို Validate လုပ်ခိုင်းပါတယ်။ လိုင်စင်ဗားရှင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဒီလို ပြဿနာ တက်တော့တာပဲ။ Windows ကြီး လိုင်စင်ဗားရှင်းဖြစ်အောင် Windows ရဲ့ Product Key လေးကို ပြောင်းရင် ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Product Key တွေကလည်း မြန်မာပြည် မှာထပ်နေလောက်ပါပြီ။ အာက်မှာပေးထားတဲ့ WGA ကို Crack လုပ်တဲ့ Program လေးကို Download ဆွဲထားလို့ ရပါတယ်။ Genuine Victim ဖြစ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေလည်း ဒီ Program နဲ့ပဲ Genuine Victim ကနေ လွတ်အောင် လုပ်လို့ရပါတယ်။
Download link: http://ifile.it/n0w78qz
အဆင်ပြေလို့ ကျေးဇူတင်မယ် ဆိုရင် IT Men က ကိုသူရိန်ကိုတင်ပါဗျာ။ သူပြောထားတဲ့ အတိုင်း ပြန်လည် ဖောက်သည်ချတာပါ။
မွှားသွားလို့ ဆောတီး မျောက်မျောက်ရေ ။ ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် regedit ပါ။
ကိုhappy monkeyရေ ကို Yaung Sein ပြောတဲ့ နည်းလဲ သုံးလို့ရတယ်ဗျ။ သူစာလုံးပေါင်း မှားလို့ဖြစ်တာ regiedit မဟုတ်ဘူး regedit ပါ။ အဆင်ပြေမှာပါ။
hartha wrote: »
သြော် ဟုတ် ကဲ့Bro ခုပဲ စမ်းကြည့်ပါ ့မယ်...ဒီအတိုင်းလေးပဲ ပေါ်နေတာ ပါ ကွက် တိပါပဲ မျောက် ဖြစ်နေတာနဲ ့.. း)
ဟုတ်ပါတယ် အဲဒီအတိုင်း ရဲရဲသာလုပ်လိုက်ပါ ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်
ကျနော့ဆီမှာဖြစ်တုန်းကလည်း အဲဒီအတိုင်း လုပ်လိုက်တာအဆင်ပြေပါတယ်
မမမင်းကီးပါဗျ။ :d ကိုကိုဟုတ်ဝူး
မွှားသွားလို့ ဆောတီး မျောက်မျောက်ရေ :d ။ ပြန်ပြင်ပေးထားပါတယ် regedit ပါ။
ကို ရောင် စိန်ရေ... ကျေးဇူးပဲ အိုကေသွားပြီ... အဲတာကြီး မပေါ်လာတော့ဘူး..:d
(တော် သေးတယ် မျောက် ကွန်ပျူတာ ရေတိမ်မနစ်တယ်):))
အဲ အခုကွန်ပျူတာ ရှပ်ဒေါင်းချရင် တစ်ခုခု ဆို ထပ် မေးဦးမှာနော်.... ဟီး